Norvezy - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Norvezy
Ahoana ny fomba hahitana asa any Norvezy
Novambra 23, 2020 Maitri Jha asa, Norvezy
Mpitsoa-ponenana ny 14 isan-jaton'ny mponina totalin'i Norvezy. Ny ampahatelony amin'izy ireo dia tonga any Norvezy mitady asa. Ny kalitaon'ny fiainana misy any Norvezy dia manintona olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Fahazoana mijery toerana mahavariana, malaza eran'izao tontolo izao
Visa any Norvezy ho an'ny karana
Septambra 14, 2020 Maitri Jha Norvezy, visa ho
Mikasa ny hitsangatsangana any Norvezy, ka ho an'ny dingana voalohany dia mila mangataka visa ianao. Misy karazana Visa hafa azonao ampiasaina. Ny karazana visa ilainao dia miankina amin'ny tanjon'ny fitsidihana
Ahoana ny fangatahana Asylum any Norvezy
Aogositra 30, 2020 Maitri Jha Norvezy, mpitsoa-ponenana
Te hijanona any Norvezy ve ianao sa mila fialokalofana any Norvezy? Tokony hanandrana izany ianao, na maninona no tsy manandrana? Tsy isalasalana fa i Norvezy dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto an-tany. Ary koa, itoeran'ny maro hafa
Te hianatra any Norvezy ve ny maniry hianatra? Mamaky ity lahatsoratra ity!
Enga anie 5, 2020 Maitri Jha Norvezy, fianarana
Ny vidim-piainana any Norvezy dia avo. Na izany aza, ny fianarana any Norvezy dia mety tsy ho lafo toa ny fiheveranao azy. Satria ny Oniversite sy ny oniversite dia tsy mitaky saram-pianarana ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena. Ny oniversite norveziana koa dia manome fanabeazana kalitao. Ary koa, mianatra any Norvezy
Fomba fitaterana any Norvezy
Novambra 12, 2019 Antika Kumari mandehana, Norvezy
Norvezy dia manana fomban-drazana fitaterana rano taloha, saingy ny làlana, ny lalamby ary ny fitaterana an'habakabaka dia nitombo hatrany nandritra ny taonjato faha-20. Noho ny hakelezan'ny isan'ny mponina, ny fitateram-bahoaka dia somary tsy dia vita any ambanivohitra any Norvezy, na izany aza ny fitateram-bahoaka, ary tsara ny tanàna manodidina
Toerana mpizahatany malaza any Norvezy
Novambra 12, 2019 Antika Kumari Norvezy
Norvezy dia firenena skandinaviana izay misy tendrombohitra sy glacier ary fjord lalina amoron-tsiraka. Oslo, renivohitra, dia tanànan'ny toerana maitso sy ny tranombakoka. Ny sambo Viking amin'ny taonjato faha-9 dia aseho ao amin'ny Museum of Viking Ship Museum any Oslo. Bergen, miaraka amin'ny trano hazo miloko marevaka
Fikarakarana ara-pahasalamana any Norvezy
Novambra 12, 2019 Antika Kumari fahasalamana, Norvezy
Ny rafi-pitsaboana Norvezianina dia miorina amin'ny fitsipiky ny fidirana amin'ny ankapobeny, ny fitsinjaram-pahefana ary ny safidy malalaka an'ny mpamatsy. Isaky ny lohany, ny fandaniam-bola Norveziana no avo indrindra eto an-tany. Ny mpikambana tsirairay amin'ny Fiantohana Nasionaly Norveziana
Tehirizo any amin'ny banky any Norvezy ny volanao
Novambra 11, 2019 Antika Kumari ny vola, Norvezy
Ny banky ambony any Norvezy dia: Bank Norwegian AS. Luster Sparebank. Storebrand Bank ASA. Niorina tamin'ny 2006, BN Bank ASA. Topimaso momba ny Banky any Norvezy Ny banky any Norvezy dia ahitana banky ara-barotra 17, banky fitehirizana 105, ary banky miankina amin'ny fanjakana vitsivitsy. Ny manampahefana misahana ny fanaraha-maso ara-bola any Norvezy no manara-maso
Ny tranobe tsara indrindra sy mora indrindra any Norvezy
Novambra 11, 2019 Antika Kumari Norvezy
Masakan'ny Norvezy Norvezy Norvezin'i Norvezy / Saga Souvenir Mall of Norvezy no iray amin'ny fitafiana lehibe indrindra, haingon-trano, fanomezana ary fanomezana souvenir any Norvezy. Manana zavatra ho an'ny rehetra. Aoka ho vatam-paty vata fampangatsiahana miaraka amin'ny motif Flam, any an-toerana
Vidin'ny fandehanana any Norvezy
Novambra 10, 2019 Antika Kumari Norvezy
Ohatrinona ny mandany any Norvezy? Ohatrinona ny vola atakalonao any Norvezy? kr1,016 ($ 111) no vidin'ny andavanandro ho an'ny fitsangatsanganana any Norvezy. Ny vidin'ny sakafo ao Norvezy mandritra ny iray andro dia kr274